Ahoana ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fikarohana Organika (SEO) | Martech Zone
Alatsinainy, Aogositra 30, 2021 Alatsinainy, Aogositra 30, 2021 Douglas Karr
Niasa nanatsara ny zava-bitan'ny organika isan-karazany ny tranokala - nanomboka tamin'ny tranokala mega misy pejy an-tapitrisany, hatramin'ny tranokala ecommerce, hatramin'ny orinasa kely sy eo an-toerana, misy ny dingana iray raisiko izay manampy ahy hanara-maso sy hitatitra ny zava-bitan'ny mpanjifako. Eo amin'ireo orinasa marketing nomerika, tsy mino aho fa tsy manam-paharoa ny fomba fiasa… saingy lalina kokoa noho ny fikarohana organika mahazatra (SEO) masoivoho. Tsy sarotra ny fomba fiasako, saingy mampiasa fitaovana marobe sy famakafakana kendrena ho an'ny mpanjifa rehetra izy.
Fitaovana SEO ho an'ny fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fikarohana Organic
Google Search Console - hevero ny Google Search Console (fantatra taloha ho fitaovana webmaster) ho toy ny sehatra an-tserasera manampy anao hanara-maso ny fahitana anao amin'ny valin'ny fikarohana organika. Google Search Console dia hamantatra ireo olana amin'ny tranokalanao ary hanampy anao hanara-maso ny laharam-pahamehanao. Hoy aho “amin'ny lafiny iray” satria tsy manome angon-drakitra feno ho an'ny mpampiasa Google tafiditra Google. Ary koa, nahita hadisoana vitsivitsy aho tao amin'ny console izay nipoitra ary nanjavona avy eo. Ary koa, ny lesoka hafa tsy dia misy akony lehibe amin'ny zava-bitanao. Ny fandaniam-bola amin'ny Google Search Console dia mety handany fotoana iray taonina… koa mitandrema.
Google Analytics - Hanome anao angon-drakitra momba ny mpitsidika anao tokoa ny Analytics ary azonao atao ny mizara mivantana ny mpitsidika anao amin'ny alàlan'ny loharanom-pahalalana hanaraha-maso ny fivezivezena ara-organika anao. Azonao atao koa ny mamaky izany ho mpitsidika vaovao sy tafaverina. Tahaka ny amin'ny console search, ny analytics dia tsy manaparitaka ny angon-drak'ireo mpampiasa tafiditra ao amin'ny Google ka rehefa mamaky ny angona ho teny lakile ianao, loharanom-pahalalana, sns. Dia mahazo ampahany amin'ny fampahalalana ilainao fotsiny. Miaraka amin'ny olona marobe tafiditra ao amin'ny Google, izany dia mety hitarika anao hivily lalana.
Google Business - Pejy valin'ny motera fikarohana (SERPs) dia mizara ho faritra telo misaraka ho an'ny orinasa eo an-toerana - doka, fonosana sarintany ary valiny biolojika. Ny fonosan'ny sarintany dia fehezin'ny Google Business ary miankina betsaka amin'ny lazanao (hevitra), ny marim-pototra ny angon-drakitrao momba ny asa aman-draharaha, ary ny fahita matetika amin'ny hafatrao sy ny hevitrao. Orinasa eo an-toerana, na fivarotana antsinjarany na mpamatsy tolotra, dia tsy maintsy mitantana ny mombamomba ny Google Business-nao mba hitazomana be.
YouTube Channel Analytics - YouTube no motera fikarohana lehibe indrindra ary tsy misy fialan-tsiny raha tsy misy fanatrehana ao. Misy taonina iray karazana horonan-tsary fa tokony hiasa ny orinasanao hitarika fifamoivoizana biolojika mankany amin'ireo horonantsary sy fivezivezena referral avy amin'ny YouTute mankany amin'ny tranokalanao. Tsy lazaina intsony fa hanatsara ny traikefan'ny mpitsidika anao amin'ny tranokalanao manokana ireo horonan-tsary ireo. Izahay dia manandrana manana horonan-tsary mifandraika amin'ny pejy rehetra amin'ny tranokala fandraharahana hanararaotana ireo mpitsidika mankasitraka azy noho ny famakiana fampahalalana taonina ao anaty pejy na lahatsoratra.
Semrush - Betsaka ny lehibe SEO fitaovana any ho any amin'ny fikarohana organika. Efa an-taonany maro no nampiasako an'i Semrush, noho izany dia tsy miezaka ny hampihozongozona anao amin'ny iray amin'ireo hafa any aho… Te-hahazo antoka fotsiny aho fa azonao dia tsy maintsy manana fidirana amin'ireo fitaovana ireo hanaraha-maso marina ny zava-bitan'ny fikarohana nataonao. Raha manokatra navigateur ianao ary manomboka mijery ny valin'ny valin'ny motera fikarohana (SERPs) mahazo valiny manokana ianao. Na dia tsy tafiditra ao anaty varavarankely manokana ianao, ny toerana misy anao dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny valiny azonao ao amin'ny Google. Fahadisoana iraisana fahitako ny mpanjifa ity rehefa manamarina ny zava-bitany manokana… miditra izy ireo ary manana tantaram-pikarohana izay hanome valiny manokana izay mety tsy hitovy amin'ny mpitsidika antonony. Ny fitaovana toa an'io dia afaka manampy anao hamantatra ireo fotoana mety hampidirana mpampita vaovao hafa toa Video, na mivoatra snippets manankarena ao amin'ny tranokalanao hanatsara ny fahitana anao.
Variable ivelany izay misy fiantraikany amin'ny fivezivezena voajanahary
Ny fitazonana fahitana ambony amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny teny fikarohana ilaina dia manankery amin'ny fahombiazan'ny varotra nomerika ataon'ny orinasanao. Zava-dehibe ny hitadidiana fa ny SEO dia tsy zavatra hatrizay vita… Tsy tetikasa io. Fa maninona Noho ireo miovaova ivelany izay tsy voafehinao:
Misy tranokala mifaninana aminao noho ny laharana toa ny vaovao, lahatahiry ary tranokala fampahalalana hafa. Raha afaka mandresy karoka mifandraika izy ireo, midika izany fa afaka mandoa vola amin'ny fidirana amin'ny mpihaino azy izy ireo - na amin'ny doka izany, na amin'ny fanohanana, na amin'ny toerana lehibe. Ohatra tsara dia ny pejy mavo. Pejy mavo dia maniry ny handresy ny valin'ny fikarohana izay mety hahitana ny tranokalanao ka voatery mandoa azy ireo ianao hampitomboana ny fahitana anao.
Misy orinasa mifaninana amin'ny orinasanao. Mety hampiasa vola be amin'ny atiny sy SEO hampiasa vola amin'ny karoka mifandraika izy ireo izay mifaninana aminao.
Misy ny traikefan'ny mpampiasa, ny fanovana ny laharana algorithmika, ary ny fitiliana mitohy izay mitranga amin'ny motera fikarohana. Google dia manandrana manatsara hatrany ny traikefan'ireo mpampiasa azy ary miantoka ny valin'ny fikarohana kalitao. Midika izany fa mety hanana valin'ny fikarohana ianao indray andro any ary manomboka hamery azy amin'ny manaraka.
Misy ny fironana fikarohana. Ny fitambaran'ny teny lakile dia afaka mitombo sy mihena ny lazany rehefa mandeha ny fotoana ary ny teny dia afaka miova mihitsy. Raha orinasa manamboatra HVAC ianao, ohatra, dia ho tonga amin'ny tampon'ny AC amin'ny toetr'andro mafana sy ny olana momba ny lafaoro amin'ny toetr'andro mangatsiaka. Vokatr'izany, rehefa mandinika ny fifamoivoizanao mandritra ny volana ianao, dia mety hiova be ny isan'ny mpitsidika amin'ny fironana.
Ny masoivohonao SEO na ny mpanolo-tsainao dia tokony handalina an'io angon-drakitra io ary handinika marina raha manatsara na tsia ireo fiovana ivelany ireo.
Teny fanalahidy fanaraha-maso izay manan-danja
Efa nahazo ny sehatra SEO ve ianao raha nilaza ny olona fa hahazo anao amin'ny pejy 1 izy ireo? Ugh… fafao ireo fefy ireo ary aza omena azy ny ora isan'andro. Na iza na iza dia afaka mitana ny laharana 1 amin'ny fe-potoana tokana… zara raha mila ezaka izany. Ny tena manampy ny orinasa hitarika vokatra biolojika dia ny fampiasana ny teny tsy misy marika sy mifandraika izay mitarika mpanjifa mety ho amin'ny tranokalanao.
Keywords marika - Raha manana anaran'ny orinasa tsy manam-paharoa, anaran'ny vokatra, na ny anaran'ny mpiasa misy anao aza… ny vintana dia ny filaharanao amin'ireo teny fikarohana ireo na inona na inona ezaka kely ataonao amin'ny tranokalanao. Aleo aho milahatra Martech Zone… Anarana tsy manam-paharoa ho an'ny tranokalako izay efa nandritra ny folo taona mahery izay. Rehefa mamakafaka ny laharam-pahamehanao ianao, ny teny fanalahidy misy marika vs. ny teny fanalahidy tsy marika dia tokony hodinihina manokana.
Teny fanalahidy mamadika - Tsy ny teny fanalahidy tsy marika rehetra ihany no zava-dehibe. Na dia mety misy laharana an-jatony aza ny tranokalanao, raha tsy miteraka fifamoivoizana mifandraika amin'ny marikao izany, nahoana no manelingelina? Nandray andraikitra SEO izahay ho an'ny mpanjifa marobe izay nampihena ny fivezivezena ara-organika azy ireo ary nampitombo ny fiovam-pon'izy ireo satria mifantoka amin'ny vokatra sy serivisy hatolotry ny orinasa izahay!
Teny fanalahidy mifandraika - Paikady lehibe amin'ny fampandrosoana a tranomboky atiny dia manome lanja ny mpitsidika anao. Na dia tsy ny mpitsidika rehetra aza dia mety hivadika ho mpanjifa, ny maha-pejy feno sy manampy indrindra amin'ny lohahevitra iray dia afaka manangana ny lazan'ilay marika sy ny fahafantarana anao an-tserasera.
Manana mpanjifa vaovao izahay izay nanangona vola an'aliny tamina tranokala sy atiny nandritra ny taona lasa izay an-jatony search terms, ary TSY nanana fiovam-po avy amin'ilay tranonkala. Ny ankamaroan'ny atiny dia tsy nokendrena akory tamin'ny serivisin'izy ireo manokana… niorina ara-bakiteny amin'ny teny momba ny serivisy tsy nomeny izy ireo. Very maina fotsiny ny ezaka! Nesorinay izany atiny izany satria tsy misy ilana azy ny mpanatrika tadiavin'izy ireo.
Ny valiny? Ny teny fanalahidy kely kokoa dia misy laharana… miaraka amina be mitombo amin'ny fivezivezena fikarohana organika mifandraika:
Ny fironana fanaraha-maso dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fikarohana organik
Rehefa mamakivaky ny ranomasin'ny tranonkala ny tranokalanao dia hisy ny fiakarana sy fidinana isam-bolana. Tsy mifantoka amin'ny filaharana eo no ho eo sy ny fifamoivoizana ho an'ny mpanjifako mihitsy aho, manosika azy ireo aho hijery ny angona rehefa mandeha ny fotoana.
Isan'ny teny lakile isaky ny toerana - Ny fitomboan'ny laharam-pejy dia mitaky fotoana sy fotoana. Rehefa manatsara sy manatsara ny atin'ny pejinao ianao, mampiroborobo an'io pejy io ary mizara ny pejinao ny olona dia hitombo ny laharanao. Na dia tena manandanja aza ireo toerana 3 ambony ao amin'ny pejy 1 dia mety efa nanomboka niverina teo amin'ny pejy 10. Ireo pejy ireo dia tiako ho azo antoka fa voatanisa araka ny tokony ho izy ny pejin'ireo tranonkala rehetra ary mitombo hatrany ny laharam-pahamehako. Midika izany fa ny asa ataontsika ankehitriny dia mety tsy handoa vola na firy na volana maro aza… fa azontsika atao ny mampiseho amin'ny mpanjifanay fa mampandroso azy ireo amin'ny lalana marina izy ireo. Aza hadino ny mampizara ireto valiny ireto amin'ny marika mifandraika amin'ny marika tsy misy marika toy ny efa noresahina tetsy ambony.
Isan'ny mpitsidika voajanahary isam-bolana - Rehefa dinihina ny fironana ara-potoana ho an'ireo teny fikarohana mifandraika amin'ny orinasanao dia te hijery ny isan'ny mpitsidika azon'ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana ianao (vaovao sy miverina). Raha mitohy isam-bolana ny fironana fikarohana, dia te-hahita fitomboan'ny isan'ny mpitsidika ianao. Raha niova ny fironana fikarohana dia tianao ny hamakafaka na mitombo ianao na eo aza ny fironana fikarohana. Raha fisaka ny isan'ireo mpitsidika anao, ohatra, saingy mihena ny fironana mikaroha raha te hanana teny lakile mifandraika… tena mahomby kokoa ianao!
Isan'ny mpitsidika ara-organika isam-bolana isan-taona - Rehefa dinihina ny fironana ara-potoana amin'ny teny fikarohana mifandraika amin'ny orinasanao, dia te hijery ny isan'ny mpitsidika azon'ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana ianao (vaovao sy miverina) raha oharina tamin'ny taona teo. Misy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny orinasa ny fizaran-taona, noho izany ny fandinihana ny isan'ny mpitsidika anao isam-bolana raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana teo aloha dia fomba iray lehibe hijerena raha mihatsara ianao na raha mila mikaroka ny tokony hamarinina.
Isan'ny fiovam-po avy amin'ny fifamoivoizana voajanahary - Raha tsy mamatotra ny fifamoivoizana sy ny fironana amin'ny valin'ny asa tena misy ny masoivohonao, dia tsy hahomby izy ireo. Tsy midika izany fa mora ny manao… tsy izany. Ny dian'ny mpanjifa sy ny orinasa dia tsy madio tandroka fivarotana araka ny tianay an-tsaina. Raha tsy afaka mamatotra nomeraon-telefaona manokana na fangatahana tranonkala aminà loharano iray izahay, dia manery mafy ny mpanjifanay izahay hanangana fomba fiasa mahazatra momba izany. Manana rojo nify, ohatra, izahay izay manontany ny mpanjifa vaovao rehetra hoe ahoana no nandrenesan'izy ireo momba azy ireo… ny ankamaroany izao dia milaza an'i Google. Na dia tsy mampiavaka ny fonosan'ny sari-tany na ny SERP aza izany, fantatray fa ny ezaka ataonay roa dia samy mahomby.
Ny fifantohana amin'ny fiovam-po dia manampy anao koa manatsara ny fiovam-po! Manosika ny mpanjifanay bebe kokoa hatrany izahay hampiditra chat mivantana, click-to-call, endrika tsotra ary tolotra hanampy amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fiovam-po. Inona no fampiasana avo lenta ary mampiroborobo ny fifamoivoizanao raha tsy mitondra fitarihana sy fiovam-po bebe kokoa ?!
Ary raha tsy azonao atao ny manova mpitsidika voajanahary ho lasa mpanjifa ankehitriny, dia mila mametraka paikady fitaizana izay afaka manampy azy ireo hitety ny dia ataon'ny mpanjifa ho lasa iray ihany koa ianao. Tianay ny takelaka, fampielezan-kevitra mitete, ary manolotra fisoratana anarana hitaona ny mpitsidika vaovao hiverina.
Ireo tatitra momba ny SEO mahazatra dia tsy hilaza ny tantara iray manontolo
Ho marin-toetra aho fa tsy mampiasa na inona na inona amin'ireo sehatra etsy ambony hamokarana tatitra mahazatra. Tsy misy orinasa roa mitovy ary tena tiako ny mandinika bebe kokoa ny toerana ahafahantsika mampiasa vola sy manavaka ny paikadintsika fa tsy manahaka ireo tranonkala mifaninana. Raha orinasa hyperlocal ianao, ohatra, ny fanaraha-maso ny fitomboan'ny fivezivezena amin'ny fikarohana iraisam-pirenena dia tsy tena hanampy, sa tsy izany? Raha orinasa vaovao tsy manam-pahefana ianao dia tsy afaka mampitaha ny tenanao amin'ireo tranonkala mandresy ny valin'ny karoka farany ambony. Na na dia orinasa kely manana teti-bola voafetra ianao, dia manao tatitra fa tsy mitombina ny orinasa manana teti-bola amin'ny marketing an-tapitrisany.
Ny angon-drakitry ny mpanjifa tsirairay dia mila voasivana, voazarazara ary mifantoka amin'ny hoe iza no kendren'ny mpihaino sy mpanjifany anao hahafahanao manatsara ny tranokalany rehefa mandeha ny fotoana. Ny masoivohonao na ny mpanolo-tsainao dia tsy maintsy mahatakatra ny orinasanao, izay amidinao aminao, inona ireo manavaka anao, ary avy eo adikao amin'ny tabilao sy ny metrika izay maninona!
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i Semrush ary mampiasa ny rohy afiliana ao amin'ity lahatsoratra ity aho.
Tags: teny lakile marikateny lakile niova foGoogle Analyticsorinasa googleteny filamatrafilaharana teny lakilefilaharana teny lakileteny fanalahidyteny lakile tsy misy marikafiovam-po voajanaharyfifamoivoizana organikamiovaova ny fifamoivoizanampitsidika voajanaharyteny lakile mifandraikafikarohana Optimizationsearch termssemrushSEOseo fampisehoanaseo tatitraseo toolsYouTubeFanadihadiana fantsona YouTubeFikarohana YouTube